Ikhaya AMERICAN STARS I-Vinicius Junior Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Vini". Indaba yethu yeVinicius Junior Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela isizinda somndeni wakhe, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendabuko, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu. Ngaphezu kwalokho, amanye amaqiniso angabonakali awaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngezingxube zakhe ezinkulu ezenza abe yindlalifa Neymar. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abheka i-Biography ye-Vinicius Junior ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Vinicius Junior Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Ukuphila Kwangaphambilini Nomndeni
Ukuqala, igama lakhe eligcwele nguVincicius José Paixão de Oliveira Júnior. U-Vinicius Junior wazalwa ngosuku lwe-12th kaJulayi 2000 emndenini wakhe omuhle ovezwe ngezansi. Wazalelwa nguyise, uVinicius José Paixão de Oliveira nomama wakhe, uTatiana Vinicius edolobheni laseRio de Janeiro, eBrazil.
Njengoba bevela emndenini othobekile nabafowethu ababili nodadewabo, kwakungelula ngaso sonke isikhathi abazali bakaVinicius Junior ukubeka ukudla etafuleni. Kodwa-ke, ngenkxaso evela kumalume wakhe osebenza kanzima u-Ulysses, izinto zahamba kahle.
Njengengane, uVini wayaziwa ukuthi wayezolile, umuntu ozodlala imidlalo yevidiyo futhi abe efonini yakhe ephathekayo usuku lonke. Emuva ngaleso sikhathi, wadlala namaqembu amaningi kuFIFA ikakhulukazi iFree Barcelona lapho ayekujabulela ukuyisebenzisa Lionel Messi. Ngaphandle kokuba umdlalo wevidiyo we-freak, uVini osemusha naye wadlala ibhola ngaphambili. Ngokusho kukaVinicius;
Ngangihlale ngidlala nabangani bami emgwaqweni futhi izizathu engangizozenza ekhaya kuphela ukudlala i-fifa, ukudla noma ukulala.
Vinicius Junior Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Umsebenzi we-Buildup
UVinicius owathola kuqala ngebhola eqala ngeSao Goncalo, emgodleni wakhe waseRio de Janeiro. Ingabe bewazi? ... USao Goncalo usekuqaleni kwenguquko yevangeli yaseBrazil futhi eduze kwayo amanzi angcolile eGuanabara Bay. Abomndeni kuphela abavela emlandweni womndeni ompofu babezohlala kule ndawo.
KuseSao Goncalo Vinicius Junior wafunda futhi wathandana "chapeau ", ikhono lebhola elibandakanya ukuphoqa ibhola phezu kwekhanda lomphikisi ngendlela elulazayo. Lokhu kwaholela ekutholakaleni kwe-Idol yakhe "Robinho", Umuntu wokuqala owawubonile okwenza ukuhamba okunjalo okukhazimulayo. Bona ividiyo ebonisa othandekayo wakhe hat hamba kusuka Robinho Ngezansi.
Ukunyakaza kweChapeau kwashaya uthando lukaVini ngebhola lezemidlalo. Konke ukubhaliswa kwebhola okwenziwe kusukela ngaleso sikhathi, uVinicius uzoqhubeka nokubeka Robinho njengomeluleki wakhe.
Vinicius Junior Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila nge-Futsal
Njenganoma yimuphi omunye onyane laseBrazil, uVinicius Junior waqala imfundo yakhe ngonyaka we-2006 (ubudala we-6). Waqala njengomfundi kwesinye sezikole zeFlamengo sika 125 eBrazil. Ngemuva kokubhaliswa, abazali bakhe balinda waze waba yi-7 ngaphambi kokuba bamvumele ukuba aqale indaba yakhe yokuphumelela. Ngalo nyaka, uVini ubhalisiwe neFustal eCanto do Rio, iqembu elidumile eNiteroi, eningizimu yeSoo Goncalo.
I-Vini's training ground futsal yayiyisikebhe esifushane esuka eRio de Janeiro. Ekuqaleni, izinto zahamba kahle njengoba abazali bakhe bekwazi ukuhamba nendodana yabo. Kodwa-ke, akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuba imali yabo iqale ukwethula umndeni kaVinicius Junior. Ngakho kwakunzima ukuthutha indodana yabo, futhi okukhethwa kukho kwakudingeka kuhlungwe.
UVinicius kwadingeka ahlale nomalume wakhe, u-Ulysses ePiedade, umasipala waseSão Paulo oseduze kakhulu nokuqeqeshwa kwakhe. Lapho, wazizwa ekhululekile futhi wathatha indawo yakhe yokudlala njengesibili ekhaya lakhe.
Ngenkathi e-futsal academy yakhe, uVinicius Junior wenyuka ngaphezu kweqembu lakhe futhi waba umdlali omuhle kunabo bonke ubudala. Akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuba athole i-No 10 shirt ngenxa yokuthi wamukelwa njengomdlali weqembu lakhe njengoba kuboniswe ngezansi.
Ngaphandle kokuphazamiseka, uVinicius wafunda nendlela yokusebenzisa izikhala eziqinile. Lokhu kwathuthukisa amandla akhe, ukucabangela futhi ekugcineni kuvulwe amandla akhe okudlala ibhola ngesikhathi esencane.
Vinicius Junior Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukujoyina uFlamengo
Ku-2009 ngenkathi uVinícius eneminyaka engu-9 ubudala, abazali bakhe bamyisa ukuba bahlaselwe iFlamengo academy. Lesi yisikhathi ngesikhathi abazali bakaVinicius Junior bebethemba ukuguqula indodana yabo kuFutsal ibe yidlali lebhola lezemidlalo.
Leli qembu labona okusemandleni alo kodwa litshela ukuthi abuyele lapho esekhulile. Ukuze angahlali engenzi lutho, uVinicius uzame ukubuyela kuFutsal ngokugcwele. Lokhu bekuyoyonakalisa ithemba lokuba ngumdlali webhola lezinyawo. Siyabonga kubazali bakhe, lokhu kuthutha kwavinjelwa njengoba kamuva wakhetha ukuthi angabuyeli ukuze abuyele emuva futhi wanquma ukulinda.
Ngenyanga ka-Agasti 2010, uVinicius uthathe uvivinyo lokuhlolwa kweqembu lebhola lebhola leFlamengo futhi walidlulisela. Njengomvuzo wokudlulisa leli cala, ubaba wakhe wathenga ithikithi lakhe lokuqala lokudlala ibhola ukuze abone umdlalo wetiyi eFlamingo ophezulu e-Estádio Luso Brasileiro.
Vinicius Junior Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukulungiswa
Ngesikhathi eFlamengo, uVinicius waba yinkanyezi encane eyayiyobona impilo yakhe-ishintsha nsuku zonke. Ujoyine iqembu lakhe labadlali beFlamengo esiteshini sakhe sokuqeqesha esasizungeze i-70km kusukela lapho ehlala khona.
Izinsuku zakuqala eFlamengo wabona umndeni wakwaVinicius Junior uphoqelelwe ukwenza imali eyengeziwe ukuze indodana yakhe igcinwe, wazi ukuthi kwakuyisigaba esibalulekile empilweni yakhe. Ngesikhathi ubaba wakhe efuna umsebenzi ongcono eSao Paulo, umama wakhe kwakudingeka athuthele ukujoyina indodana yakhe eyayisaphila nomalume wakhe. Ekugcineni, ubaba wakhe wanikeza umsebenzi wakhe futhi wanikeza usizo lwezezimali kwaba yinto evamile.
Ngesikhathi esifundeni saseGavea, umama kaVinicius Junior wayezothatha ibhasi eceleni kwendodana yakhe, ehamba naye eyokwenza. Ngesikhathi indodana yakhe izoqeqesha nabalingani bakhe, uTatiana wayelinda ngesineke epakini elifanayo ukuze abone ukubuyela kwakhe.
Njengoba isikhathi siqhubeka, izinto zaba lula kakhulu emndenini weVinicius. I-van yathengwa okuyinto evumela iVinicius ukuba iqondiswe ngqo kuNinho ekwenzeni i-Urubu, emhlabathini wakhe wezemfundo.
Vinicius Junior Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukukhula Nokuphakamisa Udumo
Ngemuva kokubhalisela uFlamengo, uVinicius wabonisa ngesicelo sakhe ukuthi usele emuva. Lokhu kwakuyisimemezelo samanga. Kodwa-ke, akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuthi kubonakale ukuthi ungumhlaseli hhayi umhlane ongakwesokunxele njengoba usanda kuthiwa. Lokhu kubonakale njengoba ehamba phambili eqenjini lakhe elibhekene neqembu lakhe eliyinkimbinkimbi yokuqala njengomdanso. Ngaphansi kweVinicius encane ezwa umuzwa wakhe wokuqala.
Kusukela emidlalweni yokunqoba, wonke umuntu eklabhu kufaka phakathi umphathi wakhe osemusha waqaphela ukuthi i-jewel ikhona. U-Vinicius akazange athole kuphela umdlali womklomelo wezokuncintisana, kodwa futhi ne-boot golden.
Vinicius Junior Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Izinqubekela phambili
Leli qembu lochwepheshe lagcina lenzelwa uhlangothi lweFlamengo ngemuva kweminyaka eyishumi kusukela ubaba wakhe emyisa esikoleni sikaFlamengo eSao Goncalo. Lokhu kwenzeka ngonyaka we-2017, unyaka ongakhohlwa kakhulu empilweni yakhe. Lapho ebona ekwenza uqale, uTim Vickery I-ESPN FC once wenza ihlaya lalo ethi;
"UVicicius ekuqaleni kwakhe wayelokhu ebukeka njengomfana webhola obegijima enkundleni lapho kungekho muntu obheka."
Ukuqhathaniswa okunzima kangaka kwaphela ngemva kokuthi uVinicius Junior wazibonakalisa eyindoda ethandwa kakhulu ensimini. U-Tim Vickery wayethukile ukuqala ukubona amabhangi abasha aseBrazil futhi agubha ngesitayela esiyingqayizivele kwesigaba sakhe seFlamengo.
Ngemuva kwezinsuku ezimbili ngemuva kokuqala kukaVinicius, uFlamengo umemezele ukuvuselelwa kwenkontileka yakhe. Lokhu kubone isigatshana sakhe sokukhululwa sisuka ku-€ 30 kuya ku-€ 45 million. Lesi sinqumo senziwa ngoba amalungu e-Flamengo ebhodi akulindele ukuhlukumeza amaqembu aseYurophu.
Uthi bewazi?... UManchester United kubikwa ukuthi uyingxenye yamaqembu okuqala ayezama ukuthola ukutholakala kwakhe futhi mhlawumbe amkhwelise emdlalweni wemidlalo yamaphupho. Ngeshwa, uSihlalo weMan United, Ed Woodward akazange aphumelele kakhulu ukuxoxisana noFlamengo nezinkulumo zokudlulisela azitholanga kude.
Vinicius Junior Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- The Tournament
Ngawo lowo nyaka ngo-Mashi 2017, iMidlalo ye-U-17 yaseNingizimu Melika yafika futhi uVinicius wamenyiwe ukuba amele iBrazil. Kulo mqhudelwano, uVinicius uzethule eNingizimu Melika ngokushaya amagoli ayisikhombisa njengoba iBrazil iphumelele umdlalo werekhodi 12th.
UVinícius Júnior ngemuva kokuwina umdlalo wawungeyona nje umdlali ongcono kakhulu womqhudelwano. Uphinde wadansa indlela yakhe ukuba abe umgomo wabo ophezulu-umxhasi ngezinhloso ze-7.
Uthi bewazi?… Phakathi nomdlalo phakathi kweBrazil neParaguay, uVinicius wakhiqiza amahle amathathu i-chapeaus ngokulandelana okusheshayo futhi kamuva waqoqa ibhola ngehlombe lakhe lokunene. Buka ividiyo ngezansi.
If hat I-movie ayingakaze ikhonjiswe, ngabe ngabe ikhonjiswe khona lapho.
Vinicius Junior Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- I-European Hunting
Ngemva nje komncintiswano, amaqembu aphezulu aseYurophu aqala ukukhononda nge-price price ephezulu yeVinicius. Bathi wayeyintombazane esanda kushayela ibhola esikoleni.
Abadlali bebhola bebhola bathi futhi ibhola lakhe elingaphansi kwe-17 linikeze ikusasa lakhe kancane noma lingekho. Lezi zimpikiswano zenziwe ukuthola izizathu zokuthi umthamo wamanani aphezulu abekwe kuye futhi mhlawumbe ubone ukuthi kuncishisiwe. Ngokuqondene namakhono akhe, kunzima ukuba baqinisekise izindleko zakhe ze-€ 45 million.
Naphezu kwezimpi zokudlulisa, amaqembu aseYurophu afana neCom Barcelona, ​​Real Madrid bazimisele ukukhipha amadayisi abo. Bobabili bazimisele ukukhokha imali engu-45 million yezinsizakalo zeVinicius ngaphansi kwezimo ezithile. Womabili amaqembu ayezimisele ukukhokhela ingxenye yesithathu yemali ekuqaleni kanti enye inkokhelo eyokhokhwa lapho ebonakalisa eyinhlangano ephezulu eSpain.
Vinicius Junior Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Isinqumo
Akuzange kuthathe isikhathi eside abadlali abavuthiwe be-Real Barcelona kwavela endaweni yesehlakalo njengokuqala kukaVinicius Junior. Lokhu kwakungenxa yokuthi iVinicius yayithande i FC FC kokubili neqiniso kanye neFIFA.
Kwakunamahemuhemu eBrazil ukuthi Neymar yena waxhumana noVinícius ukuze adumise izici ezinhle zeCamp Nou. Kodwa-ke, i-FC Barcelona ibonakala ingathandi ukufanisa isigatshana sayo sokukhululwa kwezinkanyezi. Ukudluliselwa kwakuqhubeka kahle, futhi okuningi kwezinguquko ezibophekile ziboshwe ngenxa yamathegi wezindleko ezithintekile futhi ubudala bakhe bakha izinkinga.
Njengoba ngesikhathi FC FC isasenquma ngesisindo seminyaka engu-16, i-Real Madrid yangena ngamandla. Baqhubeka bekhokha € 46 million futhi ekugcineni bawina umncintiswano. Esikhundleni sokuhamba ngaphezu kwamakhilomitha angu-8,000 eSpain, uVinicius wavunyelwa ukubuyela eBrazil ukuthuthukisa eFlamengo kuze kube nguJulayi 2018.
Ngokushesha ngemuva kokusayina i-Real Madrid, amahemuhemu aqala ukuhamba ngezinyawo ukuthi umndeni kaVinicius Junior wawusemva kokuthutha hhayi yena. Futhi ngenxa yobuso engakaze abufune i-Real Madrid. Ngemuva kokuxoxisana, u-Ulysses wakhe uthi uVinicius nguye owakhuluma naye ngesikhathi esenza isinqumo sakhe. Ngamazwi akhe;
Ngambiza ngathi, 'Kufanele uthathe isinqumo.' Futhi impendulo yakhe yayiyi: "Hala Madrid!" Ngifunga kuNkulunkulu, ngenjabulo yami. Ngaphandle kwalokho, Casemiro futhi Marcelo ubuye efuna iVinicius ukuba eze e Real Madrid ethi bayomsiza.
Uthi bewazi?… Ukudluliselwa kukaVinicius Junior eMadrid kwaba mlando futhi wagubha njengomdlali obiza kakhulu kuneminyaka engaphansi kwe-18 ewake wathengiswa ebhola. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Vinicius Junior Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
Isikhathi okumelwe avikele ngayo imali yakhe eyizigidi ezingu-€ 46 ngaphandle kokungabaza kuhambisana nomthwalo nemali. Lokhu kusho ukuthi kufanele agcine ubuhlobo bakhe bomshado buyimfihlo kakhulu. Imibuzo mayelana nentombi noma umfazi weVinicius Junior iye yaveza imibono ejabulisayo ngenxa yesithombe ngezansi.
Kodwa-ke, kuyindaba nje yesikhathi ngaphambi kokuba amaqiniso afanele mayelana nobuhlobo bobudlelwane beVinicius Junior azivelele.
Vinicius Junior Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Imininingwane yomuntu
I-Vinicius inomuntu enembile nangomzwelo. Uzwela kakhulu, uzwela futhi unendaba kakhulu ngezinto eziphathelene nomndeni wakhe nomuzi. Yingakho enza impilo yakhe nobuhlobo bakhe bomuntu siqu buzimele. Nokho, uVinicius wabuye wembula ulwazi oluthe xaxa mayelana nokuphila kwakhe ngesikhathi exoxwa nomlobi wezindaba waseSpanish.
Ukuxoxwa okwenzekile ngenkathi eyi-18 kwembula amaqiniso athakazelisayo ngeVinicius Junior. Okokuqala, akanalo ikhaya nabazali bakhe basalokhu beqoqa futhi bephethe imali yakhe. Okwesibili, wabhekana nobandlululo ngisho nasezweni lakubo eBrazil. Ekugcineni, izinkumbulo zakhe ezisemncane zokukhumbula izingane zihambisana nokudlala iFIFA. Leli qiniso lesithathu leVinicius Junior lafika ngemuva kokuvumela intatheli ukuthi abe nekhamera yangemuva edlala iFIFA.
Ekhuluma ngeFIFA, abalandeli abaningi be-EA game futhi baqinisekiswe ngemodi yokusebenza ukuthi iVinicius Junior izofinyelela emkhakheni we-93 + eneminyaka engu-22 ehambisana neNdebe Yezwe ye-2022 FIFA.
I-Vinicius Junior Personality Facts: UVinicius Junior akaphuzi utshwala kodwa u Coca-Cola kuphela. Ukuqala kokuqala okuyoba nakho ngaye kusikisela ukubukeka okunemibono njengoba kuboniswe esithombeni esingezansi.
Ekhuluma ngamaqiniso akhe, uVinicius wake wathi;
"Ubaba nomndeni wami bangivikela kukho konke okubi ngakho ngishiywe nabantu abaye bangisekela njalo futhi bebelokhu behamba nami kusukela ekuqaleni."
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokuthatha isikhathi sokufunda i-Vinicius Junior Childhood Story kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.